More Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga iyo Seville duulimaadyada Lufthansa hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » More Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga iyo Seville duulimaadyada Lufthansa hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Jarmalka Jebinta Wararka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Wararka Burburinta Portugal • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Spain • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Goobaha fasaxa Yurub ee ugu muhiimsan hadda waxaa la siin doonaa in ka badan 80 duulimaad oo dheeraad ah oo ka imanaya Madaarka Frankfurt Rhein-Main iyo in ka badan 50 duulimaad oo dheeraad ah oo ka imanaya Munich.
Lufthansa waxay ku dartay 130 duulimaad oo dheeraad ah oo ka kala yimid Frankfurt iyo Munich kuna aaday meelaha fasaxa Yurub ee caanka ah.
Lufthansa waxay ku dhawaaqday ballaarinta duulimaadyada gudaha ee Frankfurt ilaa Berlin, Hamburg, Munich iyo Munich ilaa Berlin, Hamburg iyo Düsseldorf.
Laga bilaabo Oktoobar waxaa jiri doona ilaa kow iyo toban xiriir maalinle ah oo ka socda Frankfurt ilaa Berlin halkii ay ka ahaan lahaayeen sagaal xiriir maalinle ah.
Baahida aadka u sareysa ee duulimaadyada meelaha firaaqada ah ayaa sii socota fasaxyada dayrta ee soo socota. Ka dib Ogosto, Oktoobar waxay muujineysaa kororka ugu sarreeya ee ballansashada qoraxda, meelaha Yurub. Sidaas darteed, Lufthansa ayaa sii ballaarineysa barnaamijkeeda duulimaadka meelaha caanka ah ee cadceeda ah.
Lufthansa meelaha loo aado Spain ayaa si gaar ah loogu baahan yahay. Sidaa darteed, shirkaddu waxay hadda siinaysaa duulimaadyo dheeraad ah Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura, Malaga iyo Seville. Boortaqiiska, Talyaaniga iyo Giriigga ayaa iyaguna si gaar ah caan ugu ah. Sidaa darteed Lufthansa waxay bixinaysaa duulimaadyo dheeri ah Faro iyo Madeira (labadaba Portugal), iyo sidoo kale Cagliari oo ku taal Sardinia, Catania Sicily, iyo Rhodes (Greece) inta lagu jiro xilliga fasaxa dayrta.
Marka la qorshaynayo, dadka socotada ah waa inay had iyo jeer ilaaliyaan xeerarka gelitaanka iyo karantiilnimada ee khuseeya iyo kuwa hadda jira.
Intaa waxaa dheer, baahida loo qabo safarka hawada ayaa si aad ah ugu koraysa safarka ganacsiga. Lufthansa sidaas darteed waxay sii wadi doontaa inay ballaariso dalabkeeda duulimaadka gudaha ee waddooyinka kuwaas oo si gaar ah muhiim ugu ah socotada ganacsiga. Dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay, diyaaradda ayaa horay u ballaarisay adeegyadeeda Oktoobar 45 boqolkiiba waddooyinka laga soo bilaabo Frankfurt ilaa Berlin, Hamburg, Munich iyo Munich ilaa Berlin, Hamburg iyo Düsseldorf, marka la barbar dhigo July.
Hadda, xiriirro dheeri ah ayaa lagu bixiyaa ogeysiis gaaban. Tan macnaheedu waa, waxyaabo kale, laga bilaabo Oktoobar waxaa jiri doona ilaa kow iyo toban xiriir maalinle ah oo ka socda Frankfurt ilaa Berlin halkii ay ka ahaan lahaayeen sagaal xiriir maalinle ah.
Intaas waxaa sii dheer, waxaa jiri doona toban duulimaad oo maalinle ah oo ka imaan doona Frankfurt ilaa Hamburg halkii ay ka ahaan lahaayeen sideed xiriir maalinle ah. Xaaladdu waxay la mid tahay Munich: Halkii lix xiriir maalinle ah, jadwalka duulimaadka ee “MUC” waxaa ku jiri doona ilaa sagaal xiriir maalinle ah oo ku wajahan Düsseldorf laga bilaabo Oktoobar.
Sidoo kale, iyadoo la ballaarinayo jadwalka duulimaadka, xiriirro badan ayaa hadda la heli karaa maalintii oo dhan. Dadka socotada ah oo inta badan doonaya inay subaxdii ama fiidkii duulaan ayaa hadda ka faa'iideysan kara jadwalka duulimaadka oo la hagaajiyay.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 22
شات صوتي شات عراقي دردشة عراقية